Dmitry Raspopov - umlobi emangalisayo omsebenzi wakhe idonse eziningi abafundi. Izethameli kukhiwa imigqa yokuqala kakhulu. Umbhali usebenzisa inqubo esiyingqayizivele: yena esihlanganisa yonke. Ezinye Ubuntu ingatholakala uchungechunge ezihlukahlukene, idlule izithombe like. Nakuba ukuba khona kwabo akuphazamisi umphumela elandisayo, umfundi akabashiyi uthathe leso sinyathelo ngaphandle ukunakwa.
Raspopov Dmitriy Viktorovich lithi hhayi kumbhali emahle ukutshela kahle endabeni yokuphila kwakhe. Kodwa empeleni, ayenakho kakade ukuze uthole zilimi yakhe, futhi ayiminingi ngokweqile. Yini eyaziwayo ukuthi okokuqala 2009.
umbhali uchungechunge zenzelwe zilimi amaningi:
"Izindengezi Izinhliziyo" kuyoba esilindele abalandeli we Saga of eyayisekhanda lami.
"Blade Master" - Classic zenganekwane, igodla ezinkulungwane zabalandeli wanelisekile uhlobo.
"Ndodana Galaxy" - lwesayensi isikhala fantasy. Uchungechunge ayikapheli, ubhala nombhali yokugcina ingxenye.
Umbhali akuyona kuphela egameni lalo. Ngo-2015, uthatha lo mbumbulu ukukhulula inoveli. Mhlawumbe, lokhu kwenzeke ngoba umkhiqizo has noluncú olusihlanganisa nge izinhlobo yakhe evamile.
"Blade Master" uchungechunge
Kuyinto omunye ethandwa kakhulu. Umbhali seziqalile ukusetshenziswa wakhe ngethi "Master Blade: Umgwaqo Kusukela". Bibliomaniac Ukugubha okwangempela eziyingqayizivele elandisayo, njengoba abayinakanga incazelo kulencane imininingwane: zokuphila kwansuku zonke, butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela izindawo ukuphila. Kodwa umbhalo hhayi ngokweqile. Futhi, kukhona ekumeni eziningana ngokwengqondo ezibonisa ukuphila kule noveli.
Ngaphesheya umgubuzelo kwamagama namanothi amahlaya ukubhinqa. Ngezinye izikhathi ngisho ngokweqile, ngezinye izikhathi kuthathwe kuze kwedlulele. Siphetfo ilula futhi ungungqondongqondo - yonke into isendaweni. Konke okwenzekayo kuchazwe. Futhi akukho umuzwa incompleteness.
Kuchubeka ochungechungeni "Blade Master. Ikhaba bakhiwa "luye lwaba engaqondakali xaxa futhi ube nemfihlo. Lapha-ke uboniswa konke kwadingeka incazelo ehlukile. Futhi kufihlwe kancane kancane alibe lisaba imfihlo, buthola ukubaluleka njengoba sisondela ekupheleni.
Encwadini yesibili kukhona ngokusebenzisa izithombe, ngalinye elikwazi ithola esasiwafanele. Ezungezwe umkhaya, abathanda namanje "ekuqaleni". Futhi okubaluleke - umbhali kwenza iziphetho, ishiya ke abafundi. A izihloko ephakanyiswe nemibono ngeke ngizishiye ngabandayo, ngoba incazelo kutholakala ezikhathini zanamuhla futhi ezingokoqobo.
"Ndodana Galaxy" uchungechunge
Ngo-2010 it kwenziwe kwethulwa uchungechunge entsha "Ndodana Galaxy." Lapha Dmitry Raspopov igxile Umthala yesayensi, zibheke emkhathini yonke. Maphakathi ngesakhiwo - i Earthman ekabani cishe inyumbazane eplanethini yakhe. Kodwa eminyakeni eminingi edlule, Isiphelo sakhe kokuvalelwa - Kumelwe kube izindiza futhi ungungqondongqondo izimpilo. Hero kudala inkanyezi lemikhumbi elinamandla yokulwisana amarobhothi kanye intelligence yokufakelwa. Akubuzwa, ukuthi insindiso yonke ezandleni zakhe?
Kuchubeka ochungechungeni "Ndodana Galaxy - Ukuxabana" Akuyona incwadi yokugcina. Uzungu ayikapheli, yize konke lapha uya esiphethweni esinengqondo. Kungaba "crumple" umphumela, kodwa umbhali wenqaba lo mbono. Manje ubuchitha fantasy yakhe kumdlalo. Kwazi bani, mhlawumbe incwadi yesithathu ngeke abe owokugcina. Kodwa abafundi eziyimbangela yalokhu kuphela isandla, ngoba eqanjiwe Kuyathakazelisa ngempela.
Theme, ekhethwe umbhali, kanye ephakanyiswe Lukyanenko, futhi ngempela ngempumelelo. Kodwa manje umbhali has imbangi sina. Abanye bathi bibliomaniac ukuthi isitayela kombhali kakhulu elula. Kodwa kangcono, ngoba okweqa imigomo eminingi izincwadi yesayensi - akukhona okungavamile ukuba likhithike.
"Izindengezi Izinhliziyo" Series
Elven vampire romance, njengoba kuvela, akuyona alien umlobi. Dmitry Raspopov unqume ukukhipha ochungechungeni. Incwadi yokuqala "Izindengezi Izinhliziyo" kuvula umfundi emhlabeni isihloko yaphakade "Romeo and Juliet". Kodwa lapha maphakathi ngesakhiwo Prince vampire futhi inkosazana Elf. muva amabili alwayo clan usayine kuthula. Kodwa ubutha nenzondo komunye nomunye, zigciniwe.
izinhliziyo Young badonsekela nomunye, naphezu enqabelo zabazali. Ekugcineni, i-vampire unqume ukuya, wenze esekhishwa inyumbazane. Ngisele ngedwa, isikhulu kumelwe afe, kodwa lokhu akwenzeki. Ahlangana umeluleki iba Ukufa Knight. Kuyo yonke incwadi asiphethe uthando lwakhe inkosazana yenza izinto ezishaqisayo naseminyakeni nzima ukuze uthole ukusondela kuyena.
Encwadini yesibili kuvula ngayo yonke ohlangothini eziyinkinga, ukuthi kungaba ngendlela Ukufa Knight. Youth vampire wanyamalala, manje kubukeka ngaphezulu emhlabeni wangempela. Ngakho-ke uyaqaphela ukuthi uyamdinga umuntu azivikele futhi sibonisa nothando ayenalo. Futhi lokhu udinga uzame futhi.
Akukhona nje abasebenza uchungechunge Dmitry Raspopov. Izincwadi okungezona ezakho kubo, ethulwa esincane, kodwa zisekhona, futhi kungani ziphawuleka. Umkhiqizo wokuqala "uphile kabusha," esanyatheliswa ngo-2014. Lena empeleni esasisesisha RPG uhlobo, noma ungathatha futhi yesayensi, njengoba ezikhathini zanamuhla kukhona eziningi imidlalo lapho "runaway" izingane kanye nabantu abadala kusukela ezingokoqobo.
Maphakathi ngesakhiwo - impesheni, ungumdlali wangaphambili bakukhonzile. He sa ibhizinisi lakhe inzuzo indodana yakhe, kodwa lokho akusho bathethelele amathemba. A iqhawe makehle izikweletu nezinkinga zezimali. Ukuze uthole ukuhlukana kwabo, efuna ukubuyela ezweni imidlalo virtual ukwenza imali ku ukudayiswa akhawunti. Kuze kube yimanje, udonsa umngane wakhe ubudala futhi umsizi - kwenye impesheni. uyiqala kanjalo indaba elithakazelisayo kumnandi.
Ngo-2015, ngaphansi mbumbulu Viktor Yakovlev, umlobi wanyathelisa incwadi, "Shadow kaKesari." Uzungu kugxile ngendoda eyaphila ngokusebenzisa kokubili ubuso uthando (ayobe nokubhujiswa). Ngenxa yalokhu, akubonako ikhono lakhe imilingo evumela ukuba angenele inkonzo kaKesari. Futhi ngenxa yesizathu esifanayo, kuba umphindiseli, neqhawe, bakwazi ukwenza ziyathuthumela zonke izinto eziphilayo.
Yiqiniso, umtapo yomfundi digital kufanele ibe umlobi. Ngamunye wabo muhle ku uhlobo yayo.
Dmitry Raspopov waqala maduzane, wabanika izwe izincwadi eziningana. Manje kwakukhona ukusikhohlisa, engesiyo abalandeli bajabule kakhulu umdali. Kodwa yobuciko asikubekezeleli washesha, bezalwa kancane, ukugcwalisa zonke umugqa umuzwa, ubulula buchopho.
"Ubugebengu Ziyisijeziso": protagonist. "Ubugebengu Ziyisijeziso": izinhlamvu kule noveli
Famous abalobi Ukraine futhi izimbongi. Uhlu abalobi yesimanje Ukrainian
Thina niyikhulume owabhala "I Snow Queen"
Umfanekiso ugogo enovelini Gorky "Isikhathi sasebuntwaneni". Isici Heroine
Ubani owabhala "Izingane likakaputeni Grant"? Ukuhlaziya umkhiqizo "Izingane uCaptain Grant"
Kusho ukuthini igama elithi "ukuphumula eNkosini"?
Izakhiwo ezisebenzisekayo isicelo bishofit
Wire ukudluliselwa ku Savings Bank: indlela ukuze uthumele imali nge-SMS?
Kakhulu ikhokhwe umsebenzi: Bobani zezomnotho?
Rose ezenziwe iphepha - ingxenye yalo enkulu elingaphakathi yakho
Umanyolo we-Urea: isicelo semifino nezithelo zezithelo
Tequila "Sierra": incazelo okuningiliziwe kanye uhlobo lomkhiqizo
Khetha ibhokisi leposi for cottage wakho
Oro - isihlahla ezishisayo noma izihlahlana? Incazelo, ukukhahlamezeka kwendawo. Oro - kokufa esihlahleni
Tillers "Intandokazi": Ukucaciswa, ukubuyekezwa